I-Raw Ticagrelor powder (274693-27-5) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / I-Ticagrelor powder (i-274693-27-5)
SKU: 274693-27-5. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Ticagrelor powder (274693-27-5), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-ticagrelor powder isetyenziswe kunye ne-aspirin ye-dose ephantsi ukukunceda ukukhusela i-heart attack and stroke kubantu abaneengxaki zentliziyo (njenge-angina engaqinisekanga, ukuhlaselwa kwentliziyo kwangaphambili). Ingasetyenziselwa ukunqanda ukuhlaselwa kwentliziyo okanye ukubetha emva kweentliziyo ezithile zokuhlinzwa (ezifana nokufakwa kwesigxina, i-coronary artery bypass graft-CABG, okanye i-angioplasty). I-ticagrelor powder isebenza ngokuthintela iiplatelet ukuba zihlangane kunye kwaye zibavimbele ekuqulunqeni ii-clots eziyingozi. Ingumuthi we-antiplatelet. Igcina igazi lihamba ngokukhawuleza emzimbeni wakho.
I-ticagrelor powder Abalinganiswa basisiseko
I-ticagrelor powder isetyenziswe kunye ne-aspirin ye-dose ephantsi ukukunceda ukukhusela i-heart attack and stroke kubantu abaneengxaki zentliziyo (njenge-angina engaqinisekanga, ukuhlaselwa kwentliziyo kwangaphambili). Ingasetyenziselwa ukunqanda ukuhlaselwa kwentliziyo okanye ukubetha emva kweentliziyo ezithile zokuhlinzwa (ezifana nokufakwa kwesigxina, i-coronary artery bypass graft-CABG, okanye i-angioplasty). I-Ticagrelor i-powder eluhlaza isebenza ngokuthintela iiplatelet ukuba zihlangane kunye kwaye zibavimbele ekubeni benze ama-clots ayingozi. Ingumuthi we-antiplatelet. Igcina igazi lihamba ngokukhawuleza emzimbeni wakho.
Thatha la mayeza ngomlomo kunye okanye ngaphandle kokutya njengoko ugqirha ugqirha, ngokuqhelekileyo kabini imihla ngemihla. Thatha i-aspirin ye-dose ephantsi (ngokuqhelekileyo i-75-100 milligrams) kanye ngosuku ngosuku oluyalelwe ngugqirha wakho.
Sebenzisa i-Ticagrelor powder eluhlaza njengoko iyalwe ngugqirha wakho. Funda zonke iinkcukacha ezinikwe zona. Imiyalelo elandelayo ngokukhawuleza.
• Thatha i-Ticagrelor powder ngexesha elinye.
• Thatha kunye okanye ngaphandle kokutya.
• Ukuba awukwazi ukugwinya i-tablet yonke, ithebhulethi inokuchotshozwa kwaye ixutywe ngamanzi. Phuza nje emva kokuxuba. Gcwalisa iglasi ngamanzi, ugxobhoze, uphuze.
• Abo baneesibatho zokutya bangasebenzisa ithebhulethi. Yichitha i-tablet kwaye uyixube ngamanzi. Ukuxubha ityhubhu yokutya emva kokuba i-Ticagrelor ipowder eluhlaza inikwe.
• Ukufumana inzuzo enkulu, ungaphuthelwa amaxabiso.
• Qhubeka uthatha i-Ticagrelor powder njengoko uxelelwe ngugqirha wakho okanye omnye umboneleli wezempilo, nokuba uziva kakuhle.
• Yeka idilesi ephosakeleyo uze ubuye kwixesha lakho eliqhelekileyo.
• Musa ukuthatha amanani e-2 ngexesha elinye okanye amanani angaphezulu.
Isilumkiso kwi-Ticagrelor powder
Eli liyeza lingaba lubi kakhulu kwaye ngamanye amaxesha liphuma ngokufa. Ungayisebenzisi ukuba unayo nayiphi na ingxaki yegazi (kubandakanywa nesilonda esisisu) okanye ukuba uke waphala ngegazi. Ungayeki ukuthatha i-Ticagrelor powder eluhlaza ngaphandle kokuthetha nodokotela wakho. Ukumisa i-Ticagrelor powder xa ungafanelanga ukuphakamisa ithuba lokuhlaselwa kwintliziyo, ukushaywa yintlungu kunye nokufa. Sebenzisa njengoko uxelelwe.
Xelela bonke ababonelela ngempilo ukuba uthathe i-Ticagrelor powder. Oku kubandakanya oogqirha bakho, abahlengikazi, amayeza kunye namazinyo. Eli liyeza lingafuneka limele phambi kweentlobo ezithile zokuhlinzwa njengoko ugqirha wakho akuxelele. Ukuba i-Ticagrelor ipowder igqityiwe, ugqirha uya kukuxelela xa uqala ukuthatha i-Ticagrelor powder kwakhona emva kokuhlinzwa okanye inkqubo yakho.
Musa ukuthatha ngaphezu kwe-100 mg ngosuku lwe-aspirin xa uthatha i-Ticagrelor powder eluhlaza. Eli liyeza lingasebenzi kakuhle. Thetha nogqirha wakho.
I-Ticagrelor i-powder eluhlaza isetyenziselwa ukuthintela iziganeko ze-thrombotic (umzekelo wesifo okanye isifo senhliziyo) kubantu abane-coronary syndrome okanye i-myocardial infarction nge-ST phezulu. Isilwanyana sidibene ne-acetylsalicylic acid ngaphandle kokuba oku kulandelwayo kukuchasene. Akukho ubungqina obuphezulu bokusetyenziswa kwe-Ticagrelor powder ngaphambi kokungenelela kwe-coronary (PCI) nge-intercutaneous kwi-ST engaphezulu kwesifo se-coronary syndrome.
Inkcazo ye-FDA ye-Ticagrelor i-powder eluhlaza iyanciphisa izinga lokufa kwe-cardiovascular death, i-myocardial infarction (MI), kunye nokubethelwa kwabantu abane-syonous aconary or history of infyoction of myocardial.
Ukuphefumla okufutshane, intloko, isisu, isisongela, kunye ne-nosebleed. Ukuba kukho enye yeziphumo ziqhubeka okanye ziba nzima, xela ugqirha wakho okanye umsetyenzana ngokukhawuleza.
Khumbula ukuba ugqirha wakho usemisele le nyilisi kuba uye wafumana isigwebo sokuba inkulu kunomngcipheko weempembelelo. Abantu abaninzi basebenzisa le mayeza abanemiphumo emibi.
Nangona kungenakwenzeka, ukuphuma kwegazi kunokwenzeka. Tshela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unemiphumo emibi, kubandakanya: ukululaza / ukuphaphaza, ukuphuma kwamanzi okanye ukungafihli (okunjengeenkcenkceshe ezinzima ezingenakuyeka), izigxoba zamanzi / ezimnyama, zihlanza ngegazi okanye ekhangeleka njengeendawo zekhofi, umzi wamanzi / obomvu / obomvu / omnyama.
Fumana uncedo lwezonyango ngokukhawuleza ukuba unemiphumo emibi kakhulu, kubandakanywa: ukukhawuleza / ukuphuza / ukunyaniseka kwentliziyo, ukuphelelwa amandla.
Impendulo enzima kakhulu kweso siyeza ayinqabile. Nangona kunjalo, fumana uncedo lwezonyango ngokukhawuleza ukuba uyaphawula nayiphi na impawu yempembelelo enkulu, okubandakanya: ukukhawuleza, ukuvuthwa / ukukhukhuma (ingakumbi ebusweni / ulwimi / umphimbo), utywala obunzima, ukukhathazeka ngokuphefumula.
I-Ticagrelor Raw Powder
Indlela yokuthenga i-Ticagrelor powder evela kwi-AASraw
I-Ticagrelor Raw Powder Recipes: